मोदी नागरिक अभिनन्दनका लागि योग्य छैनन्: अमृत खरेल – Puleso
मोदी नागरिक अभिनन्दनका लागि योग्य छैनन्: अमृत खरेल
By:puleso Published Date: सोमवार, बैशाख १७, २०७५
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नोपल भ्रमणमा आउँदैछन् । मोदी जनकपुर धाम दर्शन गर्न जाँदैछन् । जनकपुरमा मोदीको नागरिक अभिनन्दन गर्ने कुरा निकै चर्चाको विषय बनेको छ । यस विषयमा पूर्व सचिक भिमप्रसाद उपाध्यायले ३ वर्ष अगाडि नाकाबन्दी गरेर नेपालीलाई दुःख दिएका मोदिको नागरिक अभिनन्दन गर्नु भनेको मधेशवादी नेताहरुको चाकरीको अस्त्र भएको बताएका छन् । हामीले पुलेसोमार्फत यो विषयमा बहसलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेका छौं । यसै विषयमा अधिवक्ता अमृत खरेलसँग पुलेसोले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
मोदीलाई नागरिक अभिनन्दन गरिनु ठीक हो कि होइन ?
नागरिक अभिनन्दन भनेको स्व स्फूर्त ढङ्गले जनस्तरबाट माग भई राज्यले जनचाहना अनुरुप गरिने अभिनन्दन हो। हामीकहाँ त्यस्तो जनस्तरबाटै भारतीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई अभिनन्दन गर्नै पर्छ भन्ने माग र इच्छा व्यक्त भएको मैले थाहा पाउन सकेको छैन। अतः नागरिक अभिनन्दन भन्न नमिले पनि नेपाल सरकारले अभिनन्दन गर्ने कुरा उसको तजबिजी अधिकारको कुरा हो। यसलाई नागरिक अभिनन्दन भन्नु चाहिँ किन गलत हुन्छ भने नागरिक भनेको सम्प्रभु देशको अधिकारसम्पन्न कानुनी व्यक्ति हुन् र तिनले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई अभिनन्दन गर्नैपर्छ भन्ने आफ्नो म्यान्डेट कुनै प्रकारले पनि दिएको बुझिएको छैन।
नाकाबन्दी गरेको विषय चाहिँ भारतले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले निर्धारण गरेको हाई सी अर्थात महासागरसम्मको निर्बाध पहुँचको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको थियो भनी विश्व रंगमञ्चमा प्रमाणित भइसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिएको नैतिक दबाबमा नै भारत पछि हट्न परेको विषय हो।
मोदी सार्वभौम नेपाली नागरिकका लागि नागरिक अभिनन्दनका लागि योग्य पात्र हुनसक्छन त ?
होइनन् किनभने उनको सरकारले गरेको नाकाबन्दी का क्रममा उनले निम्न बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका धाराहरु उल्लंघन गरेको छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लंघन गरेको सरकारका प्रमुखलाई पीडित राज्यले नै अभिनन्दित गर्नु भनेको दण्डहीनताको संस्कृतिलाई प्रश्रय दिनु हो। मोदी स्वयंले नेपाललाई विगतमा नाकाबन्दी मार्फत दबाबमा राखेर अहिले अभिनन्दन गराएको सन्देश जाने हुनाले यो अभिनन्दनले उहाँको पनि छविलाई माथि उठाउदैन।
मोदीले नेपालमा नाकाबन्दी गर्दा निम्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन भएको थियो :
Article2un charter
Article 42 Un charter United Nations Conventions on law of seas
Article 87 United Nations Conventions on law of seas Article 125
GATT 1994 Annex v
Safta article 3
अधिवक्ता अमृत खरेल अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र वाणिज्य कानूनको स्नातकोत्तर हुन्।
मिनेन्द्र भण्डारीको विचारमा मोदीलाई गर्नखोजीएको नागकि अभिनन्दनको विरोधमा खबरदारी गर्नुपर्छ
समग्रमा हामी कमजोर छौं, यसर्थ हाम्रो राष्ट्रियता पनि कम्जोर छ । मुलतः हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रियताको आधार सवल छैन । यो कोणबाट हेर्दा हामी धेरै जात , क्षेत्र र सम्प्रदायमा बिखण्डित छौं । हामी जुन समस्यासहित बाचेकाछौं त्यस्तै हाम्रो राजनीतिको धरातल छ । यही कमजोरीको जगबाट एकाध व्यक्तिले देश चलाउदै आइरहेका छन् , खासमा हामी संस्थागत छैनौ । यकाध शक्ति विशेषका राष्ट्रवाद यसैमा निहित छ । जनताको देशभक्तिलाई नेतृत्वद्दारा धित्कारिन्छ । सत्ताच्युत भएपछि देशभक्ति बनेकाहरु सत्तामा पुगेपछि देश लिलाम गर्छन । यस्तै होला मोदिको नागरिक अभिनन्दनको तयारी पनि । त्यसैले यसको विरुद्धमा धेरै ठूलो खबरदारीको आबस्यक्ता छ ।